Qisada Sawirkii Gilgilay Quluubta Shucuubta Adduunka!! | Foore News
Home Warar Qisada Sawirkii Gilgilay Quluubta Shucuubta Adduunka!!
Sawir muujinaya Aayad oo awowogii ku dul ooyaya
Wuxuu intaa raaciyay in markii aabihii la dilay, meydkiisa ay booliska dusha ka saareen ilmaha yar, kadibna ay sawir ka qaadeen.
Waxaa baraha bulshada lasoo dhigay sawiro dhowr oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda qaaday, inkastoo loo maleynayo in uu qaaday qof kamid ah ciidanka Hindiya.
Balse eedeymaha qoyska Khan ay u jeediyeen booliska waxaa ka hadlay taliyaha booliska Hindiya ee Kashmiir, Vijay Kumar oo waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada qoyska.
Waxaa uu Kumar sheegay in odaygaas ay haleeshay rasaas ay soo rideen kooxdii la dagaalameysay ciidanka Hindiya. Wuxuu intaa raaciyay in ciidanka ay soo badbaadiyeen ilmaha yar, qoyska marxuumkana ay iska eedeynayaan dowladda.
Balse qoyska Khan waxay sheegeen in aysan taas rumeysneyn.
“Sida ay booliska wax u sheegayaan waa mid aan waxba ka jirin, haddii uu aabahay dhexda u galay dagaalka labda dhinac, waxaa meydkiisa loogu tegi lahaa gudaha baabuurkiisa, wax nabar ah oo ka muuqda gaariga malahan,” ayuu ku andacooday Axmed oo uu dhalay odayga dhintay.
Mid kamid ah sawirada baraha bulshada qabsaday ayaa waxaa uu muujinayaa askar xambaarsan canuga yar oo saaran baabuurka ciidanka, ilmeynaya, dhiigna dharkiisa ay ku daadsan yihiin.
Kumar ayaa shirkiisa jaraa’id ka sheegay in qof kamid ah booliska laga yaabo in uu qaaday sawirka Aayad oo dul saaran meydka awoowgii.
“In marka hawgal la aadyo booliska ay qaataan taleefoon waa khalad, waxaan xaqiijin doonaa in ciidamada booliska ee hawlgalka aadaya aanay qaadanin wax taleefon ah, si aanay khatar ugu soo jiidin nafsadooda. Qof allaale qofkii baahiyay sawiradanna waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci” ayuu hadalkiisa sii raaciyay taliye Kumar.
Meydka Axmed Bashiir oo la sido
Hey’adda Amnesty international oo ka hadashay falkan ayaa sheegtay in shaacinta muuqaalka ilmaha yar ay tahay dembi dagaal oo ka hor imanaya axdi qarameedkii Juvenile ee badbaadada caruurta. Waxay intaa ku dareen in booliska ay ku xadgudbeen qoddobka 74aad ee heshiiskaas caalamiga.
Sawirka Aayad oo dul fadhiya meydka awoowgii ayaa dhaqaajiyay quluubta malaayin qof, inkastoo aanan la garaneyni sida saxda ah ee ay wax u dhaceen.
Markii baraha bulshada lasoo dhigay sawirkaas waxaa uu dhaliyay dibadbax ballaaran oo dadka Kashmiir ay uga soo horjeedaan dilka odayga iyo argagaxa ka muuqda ilmaha yar.
Dalalka Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshaha Kashmiir, waxaana marar badan dowladda Hindiya ay Pakistan ku eedeysay inay taageerto kooxaha kasoo horjeeda ee dagaalka kula jira, inkastoo xukuumadda Islamabad ay beenisay eedeymahaas.
Previous articleXurguftii Siyaasadeed Ee Saxaabada: Muqadisnimada Mabaadii’da Ayaa Ka Mudan Meeqaamka Ashkhaasta (Qaybta 3aad): – Qalinka: Prof. Axmed M. Ismaaciil
Next articleGABBAD iyo GUUN – Ilko Bariisle Qaniinyo Kululaa – Siyaasi Cabdillaahi Geeljire